November 2012 Blog Posts (132)
अछाममा भएका विभिन्न घटनामा तीन जनाको मृत्यु ।।
अछाममा बिहिबार एकै दिन ३ जनाको ज्यान गएको छ । जिल्लाका छुट्टाछुट्टै ३ जनाको ज्यान गएको हो । अत्याधिक मदिरा सेवनका कारण अछामको चण्डीका ९ जमालगाउँ निबासी ३० बर्षिय मेगे दमाईको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममले जानकारी दिएको छ । अछामाको गाँजरा गाबिसमा लाग्ने डाँैठेगडा मेला भर्न गएका दमाई अत्याधिक मदिरा सेवन गरेको र राती घर आउनेक्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । मृतक दमाईको शव आज बिहान गाजरा गाबिसको वडा नम्बर २ कुण्डालीमा फेला परेको थियो ।
Added by Tek Raj Bhandari on November 29, 2012 at 7:09pm — No Comments
बारबारा शान्ती प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एडम्स पहिलो पटक सुकुम्बासी बस्तीमा ।
बारबारा शान्ती प्रतिष्ठानका अध्यक्ष बारबारा एडम्सले सुकुम्बासी बस्तीका आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न आफु सधैँ लागिपर्ने बताउनुभएको छ । बैतडीे श्रीकोट गाबिसको थामुचमेडिया सुकुम्बासी बस्तीमा ३६ घर निर्माण पछि पहिलो पटक गर्नुभएको अवलोकन भ्रमणमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अवलोकन भ्रमणमा रहनुभएका बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिराज बिष्टले माघ महिना भित्र थामुचमेडिया बस्तीमै गएर नागरिकता दिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्नुभयो । उहाले प्रतिष्ठानले गरेको काम सह्रानीय भएको भन्दै आफुले पनि… बाँकी
Added by Purna Bahadur Khadka on November 29, 2012 at 5:43pm — No Comments
हौसिंदै रष्टिक हाउसतिर
समुदाय जुटे विकास सजिलै हुन्छ भन्ने उदाहरण हेर्ने हो भने मकवानपुरको दामन डाँडागाउँ गए हुन्छ । डाँडागाउँ दामन गाविस वडा नं. ३ मा पर्छ । धेरै बजेटमा थोरै काम गरी कागजमा विकास गर्नेहरुको लागि डाडाँडागाउँको संयूक्त आलु विकास समूह पाठशाला भएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुको लागि यस समूहले चुनौती थपिदिएको छ । उनीहरुले करिब नौ लाख रुपियाँबाट बीस लाख बराबरको रष्टिक हाउस बनाएकाछन् । ४५ फिट लम्बाइ र साढे १९ फिट चौडाइ रहेको रष्टिक हाउसको भण्डारण क्षमता ३० टन रहेको छ । डाडाँगाउँलाई जिल्ला कृषि…
Added by suraj Kumar Bhujel on November 29, 2012 at 2:00pm — No Comments
कहिले पुरा होला दक्षिणी कञ्चनपुरका जनताको सपना !
कच्ची सडक भएका कारण दक्षिणी भेगका सर्वसाधारण जनताहरु कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन । राज्य बाट उपेक्षित गरिएको र नेताहरु बाट भोटको केन्द्र बिन्दु बनाईएको कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगका जनताहरु कच्चि सडक र वर्षाका लगायत कारण दैजी–बेल्डाँडी सडकखण्ड अवरुद्ध भए पछि कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका हुन । …
Added by mohan bist on November 29, 2012 at 9:30am — No Comments
चर्पी नबनाउने घरमा पर्चा टाँसियो
अछामको सदरमुकाम मंगलसैनलाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउन गाविसले अभियानलाई तिव्र पारेको छ । मंगलसेन गाविसले आफ्नो अगुवाईमा समाजसेवि, पूर्व जनप्रतिनिधी, महिला समुह र राजनितिक दललाई परिचालन गरेको छ ।
अभियानका क्रममा बुधवार मंगलसेन वडा नं. ६ का विभिन्न टोल, मंगलसेन बजारमा रेखदेख एवं अनुगमन गरी शौचालय बनाउन र आफ्नो घर आँगन सफा राख्न दवाव दिईएको छ । नेकपा एमालेका नेता पूर्व जनप्रतिनिधि पदम बोहरा, राप्रपा नेपालका उदयराम ढुंगाना, मंगलसेन गाविस प्रतिनिधी नरेश कठायत लगायतको एक टोलीले बुधवार मंगलसेनका…
Added by Tek Raj Bhandari on November 29, 2012 at 9:30am — No Comments
व्यक्तिगत स्वार्थमा चलेको देश
राजनीति, राज्य सञ्चालनको नीति भनेर किताबा पानाहरुमा केरिएका परिभाषाहरुलाई पढेको याद आँउछ । एघार बाह्रमा पढ्दा राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले पनि मन नलागि नलागी यी परिभाषा हरु घोक्नुपर्ने बाध्याता थियो । पछि राजनीति नगर्ने मान्छे किन चाहियो यो पढाई छाडियो । आज देशको हालत, सम्झँदा राजनीतिले राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराको पत्यार लाग्न छाडेको छ ।
कुनै नीति नै छैन् यतिबेला राज्य सँग नत कानुन नै छ । राज्य कसरी चलेको छ भन्ने प्रश्न सजिलोसँग पाउँछन्…
Added by अल्टर कान्छो’ on November 29, 2012 at 8:30am — No Comments
उपहार वितरण कार्यक्रम र गजल प्रतियोगिताको तयारी
लिबाङ, मंसिर १३ । ललित साहित्य परिषद् रोल्पाले उपहार वितरण कार्यक्रम र गजल प्रतियोगिताको तयारी भइरहेको जनाएको छ । परिषद्का अध्यक्ष ओम पन्छीको अध्यक्षतामा बुधबार लिबाङमा सम्पन्न बैठकले कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेको छ । बैठकले परिषद्का उपाध्यक्ष भगवती बुढामगरको संयोजकत्वमा मञ्च व्यवस्थापन तथा पत्राचार उपसमिति, कोषाध्यक्ष दिलकुमारी बुढामगरको संयोजकत्वमा प्रमाणपत्र तथा व्याच वितरण उपसमिति, सचिव खेमराज गाउँलेको संयोजकत्वमा अतिथि सत्कार तथा चियापान उपसमिति र…
Added by Khemraj Gaunle on November 28, 2012 at 9:39pm — No Comments
राष्ट्रिय गान गाउन जान्दैनन फोरम अध्यक्ष यादव
मंसिर १३ गते बुधबार मधेशी जनाधिकार फोरमले चितवनको भरतपुरस्थित जिविस सभाहलमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया उद्घाटनका लागि उद्घोषकले राष्ट्र गान गाउन मञ्चमा आसिन केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका पधाधिकारी तथा उपस्थित सबैलाई आग्रह गरे । तत्पश्चात सबैले राष्ट्र गान गाए तर यादवले गाएनन् । सहभागीले राष्ट्र गान गाँउदा गाँउदै विचमा अड्किएपछि उद्घोषकले धन्यवाद भनिहाले ।…
Added by अल्टर कान्छो’ on November 28, 2012 at 5:00pm — No Comments
BP Koirala starts his Atma Brittanta withapeculiar statement that yet it was not time for him to write about himself. Of course, that is his greatness and great people are always more simple, straightforward and as BP himself says, emotional. That book is at par with Nehru's autobiographical works, particularly with respect to portraying the society and political upheavals of that time. Unfortunately, BP Koirala passed away too early and we are now deprived…
Added by Jiwan Kshetry on November 28, 2012 at 4:57pm — No Comments
आज सुदूरपश्मिकै ठूलो उग्रतारा मेला ।।
स्थानीय भाषामा देहिजाँतको रुपमा मानिने सुदूरपश्चिममा रहेको उग्रतारा भगवती मेला आज भव्यताका साथ समानपन गरिने भएको छ । डडेल्धुरा सदरमुकामबाट ४ किलोमिटर मात्र टाढा अमरगढी नगरपालिका वडा नं. ८ को दशरथचन्द राजमार्गसँगै सुन्दर डाँडामा रहेको महाशक्ति पिठ उग्रतारा भगवतीको मन्दिरमा हिजो बेलुकादेखि चार वटा चौलोको संगम पश्चात बिधिवत पूजा सम्पन्न गरि आज समापन गरिने भएको छ । आजको जात्रामा सुदूरपश्चिमका नौ वटै जिल्लालगायत सिमावर्ती भारतको भूभागबाट पनि दर्शनार्थीहरु आउने भएकोले प्रत्यक वर्ष भक्तजनको ठूलो…
Added by Purna Bahadur Khadka on November 28, 2012 at 8:42am — No Comments
एउटै क्याम्पसमा दुई विश्वविद्यालयको भर्ना खुला !
रामपुर कृषि क्याम्पसलाई नै केन्द्रित गरी देशकै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र भरखरमात्रै स्थापना भएको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालयले छुट्टाछुट्टै रुपमा भर्ना अभियान सुरू गरेपछि अहिले विद्यार्थीहरुमा अन्यौलता छाएको छ । विश्वविद्यालय हस्तान्तरण प्रक्रियामा विवाद देखिएपछि दुबै विश्वविद्यालयले आफ्नै ढङ्गले विद्यार्थी भर्ना अभियान थालेपछि विद्यार्थीहरुमा अन्यौलता छाएको हो ।
‘एउटै कलेजलाई केन्द्रित…
Added by अल्टर कान्छो’ on November 28, 2012 at 8:00am — 1 Comment
पूर्व गृह सचिव शाहीको सम्झनामा अक्षयकोष स्थापना ।
डोटीको तिखात्तर डुम्राकोट घर भएका पूर्व गृह सचिव बीरबहादुर शाहीको सम्झनामा अक्षयकोष स्थापना गरिएको छ । स्व. पूर्व गृह सचिव शाहीका भतिजा एवम् इन्द्र उच्च माबि डुम्राकोटका प्राचार्य मीनबहादुर शाहीले अक्षयकोष स्थापना गर्नु भएको हो । २० हजार एक सय ५५ राशीको अक्षयकोषबाट बार्षिक रुपमा पूर्व गृह सचिव शाहीको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिने प्राचार्य शाहीले बताउनु भएको छ । शाहीको गत जेठ ११ गते काठमाण्डौमा निधन भएको थियो ।
Added by Purna Bahadur Khadka on November 27, 2012 at 8:46am — No Comments
वजेटको अभावमा डडेल्धुराका तीन वटा सिँचाई योजना प्रभावित ।।
समयमा पूर्ण वजेट नआउँदा डडेल्धुराका तीन वटा सिँचाई योजनाहरु प्रभावित भएका छन् । बगरकोट गाविसमा रहेको ढिमौला सिँचाई योजना, रुपाल गाविसमा रहेको चौरुपाल सिचाई योजना र आलिताल गाविसमा रहेको गोलघर सिचाई योजना बजेटका कारण प्रभावित भएका हुन् । तीनवटा योजनाका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा करिव २ करोड ५० लाख रुपैया विनियोजन गरेको थियो । चौरुपाल र गोलघर सिचाई योजनाको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको सिँचाई कार्यालय डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख अम्मरवहादुर पालले जानकारी दिनुभयो । ढिमौला सिचाई…
Added by Purna Bahadur Khadka on November 27, 2012 at 8:45am — No Comments
सुदूरपश्चिममा अधिकांश हुलाक कार्यालयहरु भाडामा सञ्चालन हुँदै ।।
सुदूरपश्चिममा रहेका अधिकांश हुलाक कार्यालयहरु भाडामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय हुलाक सेवा निर्देशनालय दिपायलका अनुसार ४ सय ११ हुलाक कार्यालय मध्ये ३ सय ८५ कार्यालय भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । क्षेत्रीय हुलाक सेवा निर्देशनालय दीपायलका निमित्त प्रमुख लोकराज जोशीले ९४ वटा ईलाका हुलाक कार्यालय मध्ये १५ वटाको मात्रै आफ्नो घर रहेको बताउनुभयो । ९ वटा जिल्लामा रहेका अतिरिक्त ३ सय ८ हुलाक कार्यालय सबै भाडाका घरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कार्यालयले ८ देखि ३ हजार ५ सयसम्म मासिक…
बर्षेनी बढ्दो आत्महत्या ।।
बाजुरा जिल्लामा आत्म हत्या गर्नेको दर बिगतको भन्दा वृद्धि भएको छ । पछिल्लो तीन वर्ष यता मात्र जिल्लामा १७ जनाले आत्म हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । जिल्लामा आर्थिक वर्षै २०६६÷६७ मा पाँच जना २०६७÷६८ मा पाँच जना र आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ मा सात जनाले गरी १७ जनाले आत्म हत्या गरेका छन् । आत्म हत्या मध्ये एक जनाले गोली हानेर , एक जनाले खोलामा हाम फालेर अन्य १५ जनाले झुण्डीएर आत्म हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी कार्यलय बाजुराले जनाएको छ । आत्महत्या गर्नेमा १२ जना…
Added by Purna Bahadur Khadka on November 27, 2012 at 8:37am — No Comments
माओवादीलाई नेपाली जनताले नपत्याउने नेपाली कांग्रेस महासमिती सदस्य रावलको भनाई ।।
अछाम मंसिर ११
नेपाली कांग्रेस महासमिती सदस्य मानबहादुर रावलले एकिकृत नेकपा माओवादीले जनता सामु गरेको बाचा पुरा गर्न नसकेकाले अब नेपाली जनताहरुले पत्याउन गाह्रो भएको बताउनु भयो । नेपाली कांग्रेस जनाली वण्डालीको गाउँ कार्यकर्ता भेलामा प्रमुख अथितिको आसन बाट बोल्दै सो कुरा बताउनु भएको हो । एक अर्को प्रसंगमा महासमिती सदस्य रावलले राज्यको सेवा सुबिद्याबाट बञ्चित वर्गको पहिचान गरी उनिहरुलाई ससक्तीकरणगरी पाउने सेवा सुविधामा प्राथमिकताकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । भेलाका बिशिष्ट अथिति नेपाली…
Added by Purna Bahadur Khadka on November 27, 2012 at 8:36am — No Comments
पार्टीलाई मजबुद बनाउन गाँउस्तरबाट सक्रिय हुनुपर्ने सभापति शाहको भनाई ।।
नेपाली कांग्रेस अछामका सभापति पुष्पबहादुर शाहले पार्टीलाई मजबुद बनाउन गाँउस्तरका कार्यकर्ता जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ । नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय कार्य समिती क्षेत्र नं. १ साँफबगरले दशैतिहार चिट्ठा उपहार प्रदान कार्यक्रममा बोल्नु हुदै सभापति शाहले यस्ता कार्यले अझै निरन्तरता पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । क्षेत्रयि सभापति नृप खड्काको सभापतित्वमा भएको उपहार बितरण कार्यक्रममा बिशिष्ट अथिति पूर्व जीविस सभापति भरत कुमार स्वाँर, महासमिती सदस्य टिकारम खनाल, राधिका भुजेल, एमाले…
स्थानिय विकास अधिकारीलाई जिल्लामै बस्न अछामका राजनितिक दलको सुझाव ।।
स्थानिय विकास अधिकारी बिष्णु प्रसाद कोईरालाले जिल्लाको विकासका लागी आफ्नो तर्फबाट हर प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ । जिल्ला स्थित विभिन्न राजनितिक दलका पदाधिकारी संघको औपचारिक छलफलको क्रममा उहाँले जिल्लाको विकास निर्माण तथा जिल्ला विकास समिती अन्र्तगत सञ्चालित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बनाउन हरसम्भव प्रयास गर्ने उहाँको भनाई थियो । जिल्लाका सबै राजनितिक दलहरु संग मिलरै अघि बढ्ने उहाँको भनाई थियो । अछाम जिल्लामा स्थानिय विकास अधिकारी नबस्ने गरेको र यस भन्दा अघि पनि त्यो कुरा…
Added by Purna Bahadur Khadka on November 27, 2012 at 8:35am — No Comments
जिल्लाकै लामो अवधिसम्म लाग्ने केदारनाथ मेला शुरु ।।
अछाम जिल्लाको सेरा गाविसमा लाग्ने केदारनाथ मेला आजबाट हुदै छ । कार्तिक शुक्ल पञ्चमीमा शुरु भई तृतियाको राती आज धामीले आकर्Èक नृत्य सहित खला नाच्ने र ठुलो मेला लागि चतुदशिर्का दिन समापन हुने मेला शुरु भएको हो । केदारनाथ देवताको पुजाआजा सहित हुने मेला भर्न अछाम जिल्लाका विभिन्न गाविसको साथै छिमेकी कैलाली, सुर्खेत, दैलेख डोटी जिल्लाका सर्दालु भक्तजन आउने गर्दछन् । हरेक सा“झ केदार देवताको पुजा गरी धेवर अर्थात (एक प्रकारको खेल) खेलिन्छ । चर्तुदशिका दिन केदारमाडु मन्दिरमा…
Added by Purna Bahadur Khadka on November 27, 2012 at 8:34am — No Comments